asalsashan » कोरोनाका कारण जागिर चट् कोरोनाका कारण जागिर चट् – asalsashan
कोरोनाका कारण जागिर चट्
नेपालगञ्ज/कृष्ण प्रसाद चपाई खजुरा वडा नं. २ मा बस्दछन् । उमेरले २७ पुगेका उनले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका छन् । भारतको कर्नाटक भन्ने स्थानमा ७ महिना पहिले रोजगारीका लागि गएका उनी कोरोनाका कारण काम बन्द हँुदा बेरोजगार भै नेपाल फर्किएका हुन् ।
नेपाल आउन निकै संघर्ष गर्नु परेको उनको भनाइ छ । समयमा टिकट नपाउनु एउटै बस धेरै संग यात्रा गर्दा संक्रमित भइने डर यसको अलवा घर नआइ नहुने बाध्यता । जसो तसो भारतबाट यात्रा सुरु गरे पश्चात उनी धनगढी बोर्डर सम्म आइपुगे र त्यहाँबाट सिधै कोहलपुर ल्याइयो र अबेर भएका कारण १ रात त्यहि बस्नु पर्ने भयो र अर्काे दिन खजुरा क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो ।
१५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा उनलाई कोरोनाको डरले निद्रा लाग्थेन भाग्यबस कोरोना रेपोर्ट नेगेटिभ आयो र घरमा डाक्टरको सल्लाह अनुसार होम क्वारेन्टाइमा बसे । उनी भन्छन –कोरोना संगको लडाई त जितियो, रोजगारी गुमाईयो, अव कसरी घर चलाउने ?
घरमा रहेका गाईबस्तुलाई घाँस दाउरा गरेर दैनिकी बिताउनु परेको उनको गुनासो छ । स्थानीय सरकारले रोजगार गुमाएका युवाहरुका लागि सोचिदिनु पर्ने उनको भनाई छ ।